Lalela Funda Kudivayisi kuphela Kwengeziwe Buka Kufakiwe De Correo Electrónico Dirigido
I-Crear i-relación cercana con sus cliententes isinombono ocacile we-electrician. Unomvuzo ongeke ukwazi ukuthola ukwabelana nge-intanethi yilokhu okukhangisa ngakho-ke kulula ukubona imicabango yabantu esuka kubantu obakhathalelayo. Isingeniso, akukho todos los clientes son iguales. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, qhafaza ama-electrónicos cargan la bandeja de vos clients, ngakho-ke kulula ukubona imicabango yabantu esuka kubantu obakhathalelayo - friso 1 allergy care. Ukuze uthole ukwabelana nge-SEO, sicela uthole olunye ulwazi olulandelayo.
Okubalulekile, ukukhangisa nge-electro-electro-electro-debit kuyinto engcono kakhulu. Ekukhangiseni nge-electro-electro-electro-acoustic, i-técnica de talla única ayikho i-aplica. Ngalokhu, ukukhangisa nge-correo electrónico kubonisa ukuthi umuntu ongenayo isingeniso sokwenza lokho okumele akwazi ukukusiza. Ukuze uthole ukwabelana ngama-electrónicos ama-muchos clientes, u-personalizedción de personalizeción de correo electrónico angakwazi ukudala isithombe se-marque de la forma enabalandeli abahlanganyeli abathintekayo.
El Gerente Senior de Ventas de Semalt , U-Ryan Johnson, umfundi wezinhlelo zokuthengisa nge-electro-electrician.
Uma uthola ingxenye yezokumaketha kwezokukhangisa, khetha i-algunos conceptos básicos:
Lokhu kungokushesha noma okusheshayo iklayenti ihlanganyela nge-imeyili. Ingabonisa wena iphethini nesikhathi sokuphonsela e-mail enjengokuthi "sikulahlekile".
Amakhasimende ngokuqondene namaProspects
Lona umehluko phakathi kwalokho abanye abantu abathengayo nalokho abakulindele. Ngokwesibonelo,umthengi we-PS4 angalindela ukubuyekezwa emidlalweni yakamuva.
Uma uthola ulwazi oluthe xaxa, ukubandakanyeka kwakho kuhambisane nomthetho. Yenza kube lula kakhulu ukuthi ungabhekana ne-correo efana ne "extrañamos".
U-Esta isesidlangalaleni phakathi kwalabo bantu abaqhamuka nabo. Ngenhla, i-compador de PS4 isingeniso manje izaziso ezinesayensi.
Uma usebenza amabhizinisi asendaweni, kubalulekile ukuthi unciphise amasu akho we-SEOku-niche oyidingayo. Lokhu kungenza izikhangiso zakho zibhekiswe futhi zilungile. Isitolo sendawo singasebenzisa ukusetshenziswa kwe-Google Amamephu, eyasiza futhiamaklayenti afaka okuqukethwe kwawobhusayithi kuwebhu.
2. Izibalo zabantu:
Amadoda nabesifazane bahlukile kuzo zonke ubudala. Kunezici ezihlukahlukene ezingabangelanoma omunye wabo avume ukuthenga. Ezimweni eziningi, abesifazane kulula ukuthola kumawebhusayithi ahlukahlukene njengoba amadoda amaningi athengisa ezitolo. Ngokufanayo, abantu banemikhuba ehlukene yokuthenga emaceleni ehlukene. Isibonelo, umfundi ngeke enze ukukhetha okufanayo phakathiekilasini. Ngakho-ke, abantu babalulekile ekudaleni izikhangiso ezihlosiwe kanye nomkhankaso we-imeyli.
3. Isikhathi nezidingo zonyaka:
Isikhathi seviki noma usuku sithinta abathengi besikhathi esisheshayo. Ngokwesibonelo, i-imeyili yevekeumkhankaso akufanele ubonakale kufana nomkhankaso we-imeyli we-imeyili. Izindwangu ezihlukene zinamaphetheni ahlukene okubandakanya okuqukethwe kwakho kuwebhu.
4. Ukufanelana kwamakhasimende we-Google:
Leli thuluzi linge-Google AdWords. Yenza amabhizinisi athole amakhasimende afanayo ngokulayishauhlu lwamakhasimende akho wamanje nokuthola izilaleli ezintsha zenkambiso. Ithuluzi lingaletha izici zesikhangiso esincane esicacilefor SEO yakho kanye nokumaketha imeyili.
Ukuthengisa i-imeyili kuyindlela ebalulekile yokufinyelela abavakashi bewebhusayithi. Kubaningiamacala, amasu wokuthengisa nge-imeyili asebenzisa indlela ejwayelekile yokuthumela i-imeyili kubo bonke. Ukwenza i-imeyili ikhetheke futhi iyingqayizivele kumakhasimendeenye yezindlela zokuphumelela kule nqubo. Ezinye izinzuzo ze-SEO ezivela ku-segmentation ye-imeyili yokuthengisa zihlanganisa ukubuyisa emuva futhisimo esihle.